Zvitaera nezvikabudura zvechirimo | Bezzia
Zvitaera zvine zvikabudura zvechirimo
Maria vazquez | 20/06/2022 18:00 | Chii chandinopfeka
Iwe une chokwadi chekuti kune vazhinji vako kupisa kwemhepo kwakakuita kuti utore zvikabudura zvako kubva muwadhiropu. Uye ndezvekuti iyi nguo yezhizha yatova imwe nzira chaiyo yekupedzisa zvipfeko zvedu kunyange isu tisati tashandura mwaka. Unoda mazano ekugadzira zvipfeko zvine bermuda zvikabudura yechirimo?
Bermuda shorts inogona kuchinjirwa kune zvakasiyana kwazvo zvipfeko. Zvavo kureba kwemabvi inovaita imwe nzira yakakodzera mune mamwe mamiriro pane zvipfupi. Pasina kurega kuva chipfeko chipfupi uye chitsva kurwisa kupisa kwakanyanya.
Iwe unogona kugadzira zvipfeko nezvikabudura kuti uende kubasa, kuti unakirwe nekuzorora kwako masikati kana kuenda kunoona nzvimbo pazororo rako rinotevera. Bermuda shorts ndizvo chipfeko chakasiyana-siyana kuti iwe unogona zvakare kuwana neakasiyana magadzirirwo uye mavara, ari iwo ari asina kwaakarerekera mavara anonyanya kufarirwa.
Ndingabatanidza sei zvipfupi?
Uri kutsvaga kutarisa nekapfupi ndiko akakodzera kuenda kubasa? Pamusoro uye overshirt ine bhanhire rekumaka chiuno inova shamwari huru dzeizvi. Zvadaro, iwe unongofanira kusarudza zvishongedzo zvakakodzera, shangu dzepakati-heeled uye shopper, somuenzaniso.
Imwe nzira yekufunga nezvayo ndeye masutu ane zvikabudura Havasi vese vari nyore kupfeka asi vanogona kukupa kutamba kwakawanda nekugona kushandisa zvipfeko zvavo zvese pamwe chete uye zvakasiyana. Iri zhizha bheji pamasutu ane mavara akajeka, iwo maitiro!
Zvikumbiro zvinowanda kana tichida kugadzira zvipfeko zvine zvipfupi uye zvipfupi zvipfupi. Iri zhizha rinobatanidza shorts nemucheka wepamusoro uye shati ichava yakanyanya ikozvino. Uyewo hauzokanganisi kubatanidza zvikabudura zvako ne shati yedonje mukupesana ne. Idzo mbabvu, semuenzaniso, imhando yepamusoro isingawire mukusashandiswa.
Unobva kumakabudura here kana kuti unogara uchibhejera zvikabudura?
Mifananidzo - @fannyekstrand, @anoukyve, @forevervanny, @thestylertalkercom,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Zvitaera zvine zvikabudura zvechirimo
Kicheni ane showcases: yako crockery pakuona
Manicure set - Chii chimwe nechimwe chinhu chei?